Maimaimpoana ny Widget data mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Ny ivon'ny fampandrenesana dia ny toerana nofidian'i Apple tsy mba hampisehoana ny fampandrenesana rehetra fotsiny, fa tena ilaina koa ny mampiditra azy widgets samihafa izay mamela antsika hahazo vaovao haingana amin'ireo rindranasa samihafa napetrakay tamin'ny iPhone, iPad na iPod touch. Amin'ny alàlan'ny widgets samihafa, afaka fantatsika amin'ny fotoana rehetra hoe inona ny fotoana manaraka amin'ny fandaharam-potoananay, inona ny asa miandry antsika, rehefa alefa ny andian-tantara ankafizintsika, ny toetr'andro sy ny toetrany, ny sandan'ny tsena ... Misaotra ny Data Widget, izay efa niresahanay taminao tamina fotoana hafa, azonay fantarina ihany koa amin'ny fotoana rehetra, ny fanjifana ny tahan'ny angon-drakitra momba anay.
Ny tahan'ny angon-tsainay dia zavatra iray izay ankoatra ny faningana vitsivitsy, matetika no karakarainay toy ny volamena amin'ny lamba, satria rehefa hifarana izany dia tapaka foana izahay, raha toa ka tsy manapaka ny fifandraisana eo amin'ilay tsimoka ny mpamatsy anay mamela antsika hanohy amin'ny fifandraisana amin'ny Internet na dia amin'ny hafainganam-pandeha ambany aza. Ireo mpandraharaha samihafa dia manolotra rindranasa izay ahafahantsika mahalala amin'ny fotoana rehetra ny fanjifana angon-drakitra ny tahanay, ny fanjifana izay mifanaraka amin'ny ambony indrindra, satria izy ireo no manome izany ho antsika, saingy manery antsika hiditra amin'ny Internet miaraka amin'ny fampiharana azy ireo izany, dingana iray afaka maharitra iray minitra monja.
Na izany aza, miaraka amin'ny Data Widget, afaka fantatsika eo noho eo eo ho eo, firy ny MB efa laninay amin'ny tahanay ary firy sisa tavela, mba hahafahantsika manomboka manao fameperana raha ilaina izany. Izy io koa dia mamela antsika hametraka fampitandremana rehefa mahatratra tarehimarika iray isika, hanomboka hampiakatra ny tongotra mpandeha raha te-hahatratra ny faran'ny volana miaraka amin'ny angon-drakitra amin'ny tahan'ny finday isika. Efa am-bolana maro no nanandramako azy ary afaka manamarina izany aho ireo tarehimarika asehony dia mifanaraka tanteraka amin'ny zava-misy, noho izany dia fangatahana soso-kevitra ampahafantarina amin'ny fotoana rehetra momba ny tahanay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Data Widget maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Endrey ny hatsaran'ity fampiharana ity! Efa ela aho no nampiasa azy io ary nampitahako tamin'ny hafa ary ho ahy dia tsy mitovy izany!
Tena ratsy fa tsy nahazo maimaimpoana aho!
Gustavo Chacon dia hoy izy:
Miaraka amin'izany developer izany dia tsy
Valiny tamin'i Gustavo Chacon
Tsy maimaim-poana ...
Valio amin'i Maik
Manana safidy hanilika ireo fampiharana ve ianao? Ao amin'ilay famaritana dia toa tsy dia mandinika azy io aho ary manana tambajotra sosialy tsy manam-petra izay heveriko fa hiditra ao amin'ny isa MB ihany, sa tsy izany?